Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Danjirayaal Hadda Socdaal ku maraya Waqooyiga Tanzania
24/7 eTV BreakingNews Show : Guji badhanka mugga (bidixda hoose ee shaashadda fiidiyaha)
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Danjirayaal Hadda Socdaal ku maraya Waqooyiga Tanzania
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
by Apolinari Tairo - eTN Tansaaniya
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Danjirayaasha oo socdaal ku maraya Tansaaniya.
Written by Apolinari Tairo - eTN Tansaaniya
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, Mr. Cuthbert Ncube, ayaa waxaa wehliyey koox ka tirsan Danjirayaasha ATB oo ku guda jiray socdaalka isbarashada ee Waqooyiga Tansaaniya ka dib markii ay soo gabagabeeyeen Bandhigga Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika ee Koowaad shalay, Isniin, Oktoobar 11, 2021.
Booqashadu waxay ka bilaabatay dhulka hoostiisa ee buurta Meru ee gobolka Arusha.
Waxay kooxdu booqasho sharaf ku tageen Barnaamijka Dalxiiska Dhaqanka ee Tengeru kaas oo u heellan ilaalinta deegaanka Buurta Meru.
Guddoomiyaha ATB iyo wefdigiisa ayaa sidoo kale booqan doona qaybo ka mid ah gobolka Kilimanjaro oo ku yaal buurta Kilimanjaro inta ay ku guda jiraan socdaalkooda barashada.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Guddoomiyaha iyo kooxdiisa Danjireyaasha ayaa maanta socdaalkooda ka bilaabay gunta hoose ee buurta Meru ee gobolka Arusha iyagoo si sharaf leh u booqday Barnaamijka Dalxiiska Dhaqanka ee Tengeru, oo ah xarun loo aasaasay inay abaabusho oo bixiso safaro dhaqameed.
Barnaamijka Dalxiiska Dhaqanka ee Tengeru wuxuu sidoo kale u heellan yahay ilaalinta bay'ada dhaadhaca Mount Meru, oo ah meesha labaad ee ugu sarreysa Tansaaniya. Barnaamijku wuxuu kaloo u heellan yahay inuu soo jiito dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajnebiga ah ee danaynaya inay fasaxyadooda la qaataan bulshada maxalliga ah ka dibna si iskaa wax u qabso ah uga qaybqaata horumarinta mashaariicda kala duwan ee bulshada iyo dhaqaalaha ee ka faa'iidaysanaya dadka deegaanka.
Waxay ku taallaa inta u dhaxaysa Mount Meru iyo Mount Kilimanjaro, Beerta Qaranka ee Arusha waa meel kale oo soo jiidata dalxiisayaasha, oo ay ku jiraan ka -qaybgalayaashii shirka ka dib kulankoodii magaalada Arusha. Waxay ku taallaa inta u dhexeysa 2 -da tartameysa oo iska indha -tiraysa meelaha ugu sarreeya ee Waqooyiga Tansaaniya, Beerta Qaranka ee Arusha waxay siisaa baxsad deg -deg ah dadka doonaya inay nastaan ​​dhammaadka usbuuca, badiyaa waxay ka yimaadaan magaalooyinka mashquulka badan sida Arusha iyo Moshi ee Waqooyiga Tansaaniya.
Beerta waxaa inta badan xukuma Buurta Meru, oo dhererkeedu yahay 4,566 mitir (14,980 feet), waa buurta labaad ee ugu sarreysa Tansaaniya. Beerta ayaa iska indho -tiraysa bannaanka galbeedka Kilimanjaro oo ku yaal dhaadhacyada buurta Meru oo bixisa safarada socdaalka inta badan booqdayaasha Tansaaniya, Bariga Afrika, iyo qaybaha kale ee adduunka. Waxaa si fiican loogu yaqaannaa 7 harooyin, harooyinka Momella ee ku yaal xuduudaheeda, iyo tirada badan ee baaluqyada ugu da'da weyn marka la barbar dhigo jardiinooyinka kale ee Tansaaniya.
Waxaa la daboolay inta badan maalin, Buurta Kilimanjaro, buurta ugu dheer Afrika, waa mid gaar ah Goobta fasaxa dalxiiska ee Tansaaniya, oo soo jiidanaysa qiyaastii 60,000 oo fuulle sannad walba. Buurtu waxay u taagan tahay muuqaalka adduunka ee Afrika, oo dhererkeeda, koorta sumadda leh ee barafka daboolan waxay la mid tahay Afrika.
Caalami ahaan, caqabadda barashada, sahaminta, iyo fuulidda buurtan dahsoon ayaa qabatay malaha dadka adduunka oo dhan. Ilaa maanta, Buurta Kilimanjaro waxay astaan ​​u ahayd hawlo kala duwan oo qaran iyo kuwo caalami ah, ganacsi, iyo xitaa siyaasad. Shirkadaha ganacsiga iyo naadiyada kala duwan ee bulsheed waxay wataan diiwaangelintooda ay ku qoran tahay buurta Kilimanjaro si ay u muujiyaan jiritaankooda haybadda leh.
Sannadkii 1961 -kii, calankii Tansaaniya ee dhowaan xoriyadda qaatay ayaa la saaray buurta si kor loogu qaado, tooshkii xorriyadda ayaa la shiday meeshii ugu sarraysay si loo kiciyo ololaha siyaasadeed ee midnimada, xorriyadda, iyo walaalaynta.
Buurta Kilimanjaro ayaa weli ah astaan ​​iyo faan Afrika maadaama ay caan ku tahay dalxiiska. Buurtan ugu dheer Afrika ayaa lagu qoray 28 goobood oo loo dalxiis tago oo adduunka ah si loogu biirsado nolosha.
Apolinari Tairo - eTN Tansaaniya
Waxqabadka Cimilada si loo taageero Ja Ja, ma aha Blah Blah ...
Zombie Apocalypse ma ku taal Horizon?
Mustaqbalka UNWTO ee Sacuudi Carabiya iyo Isbaanishka: Waa cusub...
Hawlgal Cusub: Kor u Qaad Safarka Afrikaanka Ameerikaanka ah
Xaqiiqada COVID ee Cusub Markaad u soo duusho Maraykanka waa 20 ...
Cadaalad darrada Tallaalka ayaa caqabad ku noqon karta Soo -kabashada Cusub ee Caalamiga ah
Soo bandhigida Abaalmarinta Dhulka Xooggan: Horumarinta Cimilada ...
Inqilaabkii Guinea: Madaxweynaha waa la xiray, dowladdiina waa la kala diray ...
Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada si loogu soo bandhigo Iibiyeyaasha Soo-baxa si ...
La -talinta Fulkaanaha oo laga soo saaray Hawai'i
Heshiisyada Maalgelinta Xuduudaha ee Dalxiiska & Madadaalada ...
Diyaaradda Uganda Airlines oo duullimaad cusub ku tagtay Dubai ayaa si rasmi ah loo waqtiyeeyay ...
Kaarka caafimaadka ee COVID-19 hadda waa qasab gudaha Talyaaniga
Dalxiiska Puerto Rico Hadda Waa Horumar
Viking Cruises: Maxaa cusub?
Wizz Air ayaa bilaabi doonta 8 dariiq oo cusub oo duulimaad ah oo u socda Jordan
Dalxiiska Kariibiyaanka ayaa ka wanaagsan dunida inteeda kale
Shirkada South Africa Airways iyo Emirates ayaa iska kaashanaya South ...
Laatiin Ameerika Airbnb Cusub 12 ee ugu Jaceyl
Sunta Guryaha ee Khamriga La Qabatimay
Digniinta Caafimaadka Kanada: Gacmo -nadiifiyeyaashu ma aha kuwo caafimaad qaba
Aragtida Dalxiiska Cusub ee Hawaii waa Is -dil Dhaqaale, laakiin ma aha ...
Ma jeceshahay Cuntada Bali? Ku soo dhowow Bali
Diyaarad Yar Oo Ku Dhacday Guryaha Deriska: 2 ...
Duulimaadyada Toronto ilaa Orlando ee Swoop hadda
Maaskaro, Lederhosen, iyo biir ayaa ku habboon Air Canada cusub ...
Gurmadka Cimilada iyo Dhaqaalaha Hadda ee Dalxiiska Cagaaran ...
Thailand Indho La'aa Qulqulka COVID-19: Wuxuu riixayaa Phuket Sandbox
Daawooyinka Dhiig Karka ee Losartan Hadda dib loo soo celiyay
Euractiv, Financial Times, Politico Europe ayaa u sheegtay MAYA ...
Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ka galay qiimeynta baasaboorka adduunka cusub
Maaskaro xad -dhaaf ah oo ku jira Dagaalka Cuntada Khatarta ah
COVID-19: Dhammaanteen waan wada joognaa, laakiin dunidu waa ...
Kor -u -qaadista Gaadiidka ee Garoomada Diyaaradaha ee FRAPORT
Galmada Bilaashka ah iyo Safarrada Magaalada
Socdaalka fiisaha-la'aanta ah ee Falastiin ilaa St Kitts iyo Nevis ...
Agaasimaha Fulinta Cusub ee Ku -meelgaarka ah oo hoggaamin doona TPDCo
Taliban: Ajaanib kaliya ayaa ka bixi kara Afgaanistaan ​​...
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa Shaqaalaha Dalxiiska ugu baaqay inay helaan ...
Madaxweynaha Tanzania oo dalxiis u sameeyay dalxiis ballaaran ...
Hindiya ayaa sameysay tijaabooyin COVID-19, karantiil oo khasab ah ...
Waa maxay sababta duulimaadka Finnair loogu sii marinayo Helsinki adduunka?
FAA waxaa lagu tijaabiyay inay xaqiijiso Boeing 737 MAX: Federaalka cusub ...
El Al waxay dib u bilaabaysaa Budapest duulimaadkii Tel Aviv
Lufthansa waxay si guul leh u dhammaystirtay dhammaystirka ...
Xayiraadaha ayaa laga fududeeyay Bangkok maaddaama tirooyinka COVID ay hoos u dhaceen 30%
Fuula Buurta Kilimanjaro Fariin Rajo leh
FAA waxay iska indho tiraysaa waajibaadka kursiga Kongareeska sannadkii saddexaad
Gegida Diyaaradaha ee Heathrow London Cirka ayaa isku badalaya Buluug ...
Khamrigu wuxuu isku xiraa Catenas -ka Rothschilds: Geli Cusub ...
Jawaabta UNWTO ee Kenya: Yaa joojin kara Xoghayahan...
Ethiopian Airlines oo lagu eedeeyay hub sharci darro ah ...